၇ ရက်သားသမီးများ အတွက် အချစ် ဗေဒင်...! - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ၇ ရက်သားသမီးများ အတွက် အချစ် ဗေဒင်...!
၇ ရက်သားသမီးများ အတွက် အချစ် ဗေဒင်...!
Apann Pyay 9:37 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
တနင်္ဂနွေ သားသမီး ...
အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ထားချင်တတ်တယ်။ သူတို့အတွေးကတော့
အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးရမှာလား။ အချစ်ဆိုတာ ပေးလို့ကုန်သွားတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာနော် ....လို့ များသောအားဖြင့် ခံယူထားတတ်ကြတယ်။အခြေအနေပေးရင် တစ်ယောက်ထက်ပိုရတတ်ယူတတ်ပါတယ်။သူများအထင်ကြီးလေးစားအောင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးရင်သူတို့ ကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများဆို ဇွတ် အတင်းချစ်ရေးဆိုတတ်တယ်။
အမျိုးသမီးများကျတော့ ပွင့်လင်းတယ်၊ ချစ်သူအတွက်ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။
ချစ်သူအတွက် မိသားစု ကိုတောင်စွန့်လွှတ် အဆက်သွယ်ဖြတ် ရဲတာ တနင်္ဂနွေသမီးတွေပါပဲ ။
တနင်္ဂနွေ သမီးများကျတော့ အစွဲ အလန်းကြီးတတ်ကြပြီး ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စန်းပွင့်မှုကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားများကတော့ အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ စတိုင်တွေပြတတ်တယ် ။ ကွယ်သွားတာနဲ့ မေ့ရော။ ကွယ်မေ့ တွေ့သေအောင်လွမ်းဆို
တာ တနင်္ဂနွေ သားတွေပဲ :P
အချစ်အတွက်ပေးဆပ်ရဲတယ်။ တကယ်ချစ်လာရင်ဘာမှ မမြင်အားလုံးကို စွန့်လွတ်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ အဆင့်အတန်းမူလည်း ဂရုမစိုက် ။ ချစ်သူအပြစ်ကိုလဲ ခွင့်လွှတ်တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မရှည်တတ်ဘူး။ စတ်ဆပ်တတ်ပါတယ်။
စိတ်ကောက်တတ်ပါတယ်။ အချော့ ကြိုက်တတ်ပါတယ် ။
တနင်္လာနဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ သူစိတ်ကောက်တာ ချော့ဖို့သာပြင်ထားတော့ ။
စိတ်အပြောင်းလဲ များတတ်တယ်။ သူကတော့ မ စ ဘူး ။ သူကို စ လာရင်ပါသွားတတ်ပါတယ်။
အရမ်းကြင်နာတတ်သလို တစ်ခါ အလုပ်များ ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ဖုန်း မဆက်ပဲလုပ်နေတတ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးရင်ပြီး လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောင်နေတာ မပြီးတော့ဘူး။ အပြင်မှာ လက်တွေ့မှာ မိသားစု ကိစ္စ တွေနဲ့ ပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ မိသားစုက ပထမ ။ ချစ်သူက ဒုတိယ ပဲ ။ သူနဲ့ကြိုက်မိရင်တော့ သူမိသာစု အပေါ် မပြစ်မပြောလေနဲ့ ပြောရင် ကွဲသွားတတ်တယ်။ သူမိသားစု အပေါ် ဖေါ်လို လိုက်ပြီး ဆက်ဆံ နိုင်အောင်သာကြိုးစားတော့ ။
အစွဲအလမ်းကြီးတတ်တယ်။ ဇွတ်တရွတ်လုပ်တတ်တယ်။ မကြိုက်ခင်တော့မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်လိုပဲ ။ ရည်းစားဖြစ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် ရှေ့နေမကြီးဖြစ်သွားတော့တာပဲ ။ အလို မကျ မကြာခဏ စိတ်တို စိတ်ဆပ်ဖြစ်နေ တတ်တယ်။ အချစ်ရေးမှာ များသောအားဖြင့် သစ္စာရှိတတ်ပြီသူရဲ့ အပြောဆို မတတ်မှုကြောင့် မကြာမကြာ စကားများများနေရတတ်တယ်။ စိတ်တိုပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ အားငယ်နေကြတတ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ ကြိုက်မိရင်တော့ သည်းခံ ခြင်း တရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ပေးဖို့သာ ကြိုးစားတော့ ။
အပြောကောင်းတယ်။ ချစ်သူအတွက် ကူညီဖို့ ၀န်မလေးဘူး ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး ထားချင်တတ်တယ် ။ များသောအားဖြင့် အခွင့်ရေး ရရင် အကုန်ယူ အကုန်ပေး ချင်တတ်တယ် ။
အချစ်အတွက် အလုပ်ကိုတောင်ဖျက်ပြီး လိုက်လျှောတတ်ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်ကျင်စကားကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို ဖြတ်ပစ်ချင်တာ သူတို့ရဲ့ စရိုက်ပါ။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ချစ်သူအပေါ် သံသယဖြစ်နေ
တတ်တယ်။ချစ်သူအပေါ်အပြောကတော့ ကောင်းပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်
မလုပ်ပေးနိုင်တတ်ကြပါဘူး။သူတို့နဲ့ကြိုက်ရင်တော့ သတိထားပါ ။ လက်ထပ်ဖို့ လက်တွန့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းနေတတတ်တာ ကြာသပတေးသားသမီးတွေပါပဲ ဗျာ
အချစ်ရေးမှာ ကိုယ်က ပေးဆပ်သော်လည်း ပေးတိုင်းပြန်မရတတ်တာသောကြာ သားသမီးပါ။
ကိုယ်က တကယ်ချစ်သောလည်း နုတ်ကြောင့်သေဆိုသလိုပဲ အပြောကြောင့် ဒုက္ခ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တာ
သူတို့ ကံပေါ့ ။ တကယ်ဖြစ်ချင်နေတာ က တစ်ခု တကယ်ပြော ထွက်သွားတာ က တစ်ခု
ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။ အချစ်ရေးမှာ မေတ္တာ တရားကြီးတတ်ပြီး အစွဲ အလန်းလည်း ကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံစားလွယ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေပြီ ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင် နှောက်ယှက်မှု ပယောဂ မကြာမကြာ တွေ့ကြုတတ်တာ သူတို့ ရဲ့ ကံပါပဲ ။ များသောအားဖြင့် သောကြာအများစုဟာ ရည်းစားဦး နဲ့လွဲ လွဲ သွားတတ်ကြပါတယ်။
သူတို့နဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ ရည်းစားဦးပါဆိုရင်တော့ သတိထားတော့ ။
အချစ်ကြီးတယ်။ သံယောဇဉ်ကြီး တယ်။ ချစ်သူ ဖေါက်ပြန်ရင်တောင် ခွင့်လွတ်နိုင်တတ်တယ် ။ အပြောကောင်းတယ်။ သဘောကောင်းတယ်။
သ၀န်တိုတတ်တယ်။ သူများ ထက်ပိုပြီး သ၀န်တို တတ်တယ် ။ ကိုယ်ကတော့ မစဘူး ။ ကိုယ့်ကို စ လာရင် ပါပါ သွားတတ်ပါတယ်။ လက်သာ ရင် လိုက်တဲ့ကလေး လိုပဲ ။
ပိုဂရုစိုက်တဲ့ သူနောက် ပါ ပါ သွားတတ်ကြတာ စနေသားသမီးပါပဲ ။
စနေနဲ့ ကြိုက်ရင်တော့ ပိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပေတော့ ။
နောက်တစ်ခု က စနေသားသမီးက ကြာရင် ငြီးငွေ့သွားတတ်ကြတယ် ။
စနေသားသမီး နဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ၂ နှစ်လောက်သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး ရင်ယူချင်စိတ်လျှော့သွား
တတ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ စနေသားသမီး နဲ့ ကြိုက်ရင် တစ်နှစ်အတွင်းယူဖို့သာလုပ် နို့မို့ဆို မယူဖြစ်ပဲ ဇာတ်မြောဖြစ်သွား တတ်ပါ တယ်။
တနင်ျဂနှေ သားသမီး ...
အရမျးခဈြတတျပါတယျ။ သို့သျော နှဈယောကျပွိုငျတူ ထားခငျြတတျတယျ။ သူတို့အတှေးကတော့
အခဈြဆိုတာ တဈယောကျထဲနဲ့ပွီးရမှာလား။ အခဈြဆိုတာ ပေးလို့ကုနျသှားတဲ့ အရာမှ မဟုတျတာနျော ....လို့ မြားသောအားဖွငျ့ ခံယူထားတတျကွတယျ။အခွအေနပေေးရငျ တဈယောကျထကျပိုရတတျယူတတျပါတယျ။သူမြားအထငျကွီးလေးစားအောငျပွောဆိုတတျကွပါတယျ။ သူတို့နဲ့စကားပွောပွီးရငျသူတို့ ကိုအထငျကွီးလေးစားသှားတတျကွပါတယျ။ တကယျတမျးကတြော့ အပွောတဈမြိုးအလုပျတဈမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ အမြိုးသားမြားဆို ဇှတျ အတငျးခဈြရေးဆိုတတျတယျ။
အမြိုးသမီးမြားကတြော့ ပှငျ့လငျးတယျ၊ ခဈြသူအတှကျဘာမဆို ရငျဆိုငျခငျြတတျကွပါတယျ။
ခဈြသူအတှကျ မိသားစု ကိုတောငျစှနျ့လှတျ အဆကျသှယျဖွတျ ရဲတာ တနင်ျဂနှသေမီးတှပေါပဲ ။
တနင်ျဂနှေ သမီးမြားကတြော့ အစှဲ အလနျးကွီးတတျကွပွီး ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့စနျးပှငျ့မှုကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈရတတျပါတယျ။ တနင်ျဂနှသေားမြားကတော့ အရမျးဂရုစိုကျတဲ့ စတိုငျတှပွေတတျတယျ ။ ကှယျသှားတာနဲ့ မရေ့ော။ ကှယျမေ့ တှသေ့အေောငျလှမျးဆို
တာ တနင်ျဂနှေ သားတှပေဲ :P
အခဈြအတှကျပေးဆပျရဲတယျ။ တကယျခဈြလာရငျဘာမှ မမွငျအားလုံးကို စှနျ့လှတျရငျဆိုငျရဲတယျ။ အဆငျ့အတနျးမူလညျး ဂရုမစိုကျ ။ ခဈြသူအပွဈကိုလဲ ခှငျ့လှတျတတျတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိတျမရှညျတတျဘူး။ စတျဆပျတတျပါတယျ။
စိတျကောကျတတျပါတယျ။ အခြော့ ကွိုကျတတျပါတယျ ။
တနင်ျလာနဲ့ ကွိုကျရငျတော့ သူစိတျကောကျတာ ခြော့ဖို့သာပွငျထားတော့ ။
စိတျအပွောငျးလဲ မြားတတျတယျ။ သူကတော့ မ စ ဘူး ။ သူကို စ လာရငျပါသှားတတျပါတယျ။
အရမျးကွငျနာတတျသလို တဈခါ အလုပျမြား ခငျြယောငျ ဆောငျပွီး ဖုနျး မဆကျပဲလုပျနတေတျပါတယျ။
စိတျကူးရငျပွီး လထေဲမှာ တိုကျအိမျဆောငျနတော မပွီးတော့ဘူး။ အပွငျမှာ လကျတှမှေ့ာ မိသားစု ကိစ်စ တှနေဲ့ ပဲ အခြိနျကုနျနတေယျ။ သူ့စိတျထဲမှာ မိသားစုက ပထမ ။ ခဈြသူက ဒုတိယ ပဲ ။ သူနဲ့ကွိုကျမိရငျတော့ သူမိသာစု အပျေါ မပွဈမပွောလနေဲ့ ပွောရငျ ကှဲသှားတတျတယျ။ သူမိသားစု အပျေါ ဖျေါလို လိုကျပွီး ဆကျဆံ နိုငျအောငျသာကွိုးစားတော့ ။
အစှဲအလမျးကွီးတတျတယျ။ ဇှတျတရှတျလုပျတတျတယျ။ မကွိုကျခငျတော့မခုတျတတျတဲ့ ကွောငျလိုပဲ ။ ရညျးစားဖွဈပွီးသှားပွီ ဆိုရငျ ရှနေ့မေကွီးဖွဈသှားတော့တာပဲ ။ အလို မကြ မကွာခဏ စိတျတို စိတျဆပျဖွဈနေ တတျတယျ။ အခဈြရေးမှာ မြားသောအားဖွငျ့ သစ်စာရှိတတျပွီသူရဲ့ အပွောဆို မတတျမှုကွောငျ့ မကွာမကွာ စကားမြားမြားနရေတတျတယျ။ စိတျတိုပမေဲ့ ရငျထဲမှာတော့ အားငယျနကွေတတျပါတယျ။သူတို့နဲ့ ကွိုကျမိရငျတော့ သညျးခံ ခွငျး တရားကို လကျကိုငျထားပွီး အလိုလိုကျ အကွိုကျဆောငျပေးဖို့သာ ကွိုးစားတော့ ။
အပွောကောငျးတယျ။ ခဈြသူအတှကျ ကူညီဖို့ ဝနျမလေးဘူး ။ ဒါပမေဲ့ တဈယောကျထကျပိုပွီး ထားခငျြတတျတယျ ။ မြားသောအားဖွငျ့ အခှငျ့ရေး ရရငျ အကုနျယူ အကုနျပေး ခငျြတတျတယျ ။
အခဈြအတှကျ အလုပျကိုတောငျဖကျြပွီး လိုကျလြှောတတျကွတယျ ။ ဒါပမေဲ့ ပတျဝနျကငျြစကားကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူကို ဖွတျပဈခငျြတာ သူတို့ရဲ့ စရိုကျပါ။ ကိုယျ့အတှေးနဲ့ ကိုယျ ခဈြသူအပျေါ သံသယဖွဈနေ
တတျတယျ။ခဈြသူအပျေါအပွောကတော့ ကောငျးပမေဲ့တကယျလကျတှမှေ့ာဘာမှ ဖွဈဖွဈမွောကျမွောကျ
မလုပျပေးနိုငျတတျကွပါဘူး။သူတို့နဲ့ကွိုကျရငျတော့ သတိထားပါ ။ လကျထပျဖို့ လကျတှနျ့ ရကျရှဆေို့ငျးနတေတတျတာ ကွာသပတေးသားသမီးတှပေါပဲ ဗြာ
အခဈြရေးမှာ ကိုယျက ပေးဆပျသျောလညျး ပေးတိုငျးပွနျမရတတျတာသောကွာ သားသမီးပါ။
ကိုယျက တကယျခဈြသောလညျး နုတျကွောငျ့သဆေိုသလိုပဲ အပွောကွောငျ့ ဒုက်ခ ဖွဈဖွဈနတေတျတာ
သူတို့ ကံပေါ့ ။ တကယျဖွဈခငျြနတော က တဈခု တကယျပွော ထှကျသှားတာ က တဈခု
ဖွဈနတေတျပါတယျ ။ အခဈြရေးမှာ မတ်ေတာ တရားကွီးတတျပွီး အစှဲ အလနျးလညျး ကွီးတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခံစားလှယျတတျကွပါတယျ။ သူတို့ကတော့ အခဈြရေးမှာ ခဈြသူနဲ့ အဆငျပွပွေီ ဆိုရငျ ပတျဝနျးကငျြ နှောကျယှကျမှု ပယောဂ မကွာမကွာ တှကွေု့တတျတာ သူတို့ ရဲ့ ကံပါပဲ ။ မြားသောအားဖွငျ့ သောကွာအမြားစုဟာ ရညျးစားဦး နဲ့လှဲ လှဲ သှားတတျကွပါတယျ။
သူတို့နဲ့ ကွိုကျရငျတော့ ရညျးစားဦးပါဆိုရငျတော့ သတိထားတော့ ။
အခဈြကွီးတယျ။ သံယောဇဉျကွီး တယျ။ ခဈြသူ ဖေါကျပွနျရငျတောငျ ခှငျ့လှတျနိုငျတတျတယျ ။ အပွောကောငျးတယျ။ သဘောကောငျးတယျ။
သဝနျတိုတတျတယျ။ သူမြား ထကျပိုပွီး သဝနျတို တတျတယျ ။ ကိုယျကတော့ မစဘူး ။ ကိုယျ့ကို စ လာရငျ ပါပါ သှားတတျပါတယျ။ လကျသာ ရငျ လိုကျတဲ့ကလေး လိုပဲ ။
ပိုဂရုစိုကျတဲ့ သူနောကျ ပါ ပါ သှားတတျကွတာ စနသေားသမီးပါပဲ ။
စနနေဲ့ ကွိုကျရငျတော့ ပိုဂရုစိုကျနိုငျအောငျသာ ကွိုးစားပတေော့ ။
နောကျတဈခု က စနသေားသမီးက ကွာရငျ ငွီးငှသှေ့ားတတျကွတယျ ။
စနသေားသမီး နဲ့ တဈနှဈကြျော ၂ နှဈလောကျသမီးရညျးစားဖွဈပွီး ရငျယူခငျြစိတျလြှော့သှား
တတျကွတယျ။ အဲဒီတော့ စနသေားသမီး နဲ့ ကွိုကျရငျ တဈနှဈအတှငျးယူဖို့သာလုပျ နို့မို့ဆို မယူဖွဈပဲ ဇာတျမွောဖွဈသှား တတျပါ တယျ။